Kontantlöshetens "ရှေးဟောင်း" နှင့်အစောဆုံးသမိုင်း
စာအုပ်အနေဖြင့်အဆိုပါ cashless ပူးပေါင်းကြံစည်
ရှည်လျားသောကြောင့်ပိုက်ဆံနဲ့အခြားသောအရာတို့ကိုရန်အသုံးပြုအမှန်တကယ်ငွေသားမီ။ Shell ကပိုလီနီးရှားထိုသို့သောပိုက်ဆံအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ "ပိုက်ဆံ" ၏အခြားအဥပမာကျောက်, အမွေး, ငါးချိတ်များနှင့်ပင်မွေးမြူရေးခဲ့ကြသည်။
တောင်မှရှေးဟောင်းအီဂျစ်နဲ့ရောမအင်ပါယာအတွင်းspannmålsköpမှာဥပမာ, cashless ငွေပေးချေမှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ Western Union က New York ပြည်နယ်အတွက် Rochester ၏အမေရိကန်မွို့၌စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာနောက်ကျောကမစ္စစ္စပီပုံနှိပ်ကြေးနန်းကုမ္ပဏီဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်သည့်အခါ 1851 မှ၎င်း၏အမြစ်များရှိပါသည်။ Western Union အဓိကအားကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကြောင့်လှေတျတျောမူငွေကြေးနှင့်ကြေးနန်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။ အစောပိုင်းရက်ဒစ်ကတ်များတစ်မျိုးဥရောပအတွက် 1890 ရာစုအတွင်းပြီးသားဖြစ်ကြသည်။ 1914 ခုနှစျသူတို့သဘောတူစာချုပ်များတွင်အသုံးပြုနိုင်မယ့်ခရက်ဒစ်ကဒ်နှင့်အတူ cashless ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူ Western Union မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။
အမှန်တကယ်အကြွေးကဒ်များကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကထိုကဲ့သို့သောရေနံကုမ္ပဏီများနှင့်ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများကထုတ်ပေး, 20 ရာစုအတွက်ဝေါဟာရဖြစ်ပါတယ်။ ရေနံကုမ္ပဏီများကကတ်တွေထုတ်ပေးမှစတင်ခဲ့သည့်အခါဤအဟောင်းများကိုကဒ်များကြီးထွားလာအသုံးပြုရန်ပံ့ပိုးတစ်ခုမှာအချက်လူတွေအတွက်မော်တော်ကားတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဦးစီးဌာနစတိုးဆိုင်များလည်းအကြွေးအပေါ်ကုန်သွယ်တဲ့သူဖောက်သည်ဖော်ထုတ်ခြင်းတိုကင်တစ်ခုစီထုတ်ဝေရန်ဤဆယ်စုနှစ်ကာလအတွင်းစတင်ခဲ့သည်။ ဌာန၏စတိုးဆိုင် NK ​​မတိုင်မီအမှန်တကယ်အကြွေးကဒ်များကိုကြေးဝါကဲ့သို့၎င်းတိုကင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များတွင်အသုံးပြုပေမယ့်။ ဆွီဒင်ရဲ့ပထမဦးဆုံး "ခရက်ဒစ်ကဒ်" ဒါခေါ် NK-ကဒ်ထို့ကြောင့်အမှန်တကယ်တစ်ဦးကိုရေတွက်mässingspollettခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ 60 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်မော်ဒယ်များ၏ခေတ်သစ်သဘော NK သည့်ကိုယ်ပိုင်ကရက်ဒစ်ကတ်များကိုပေး၏။
အချို့ကုမ္ပဏီတွေကသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးဖောက်သည်အကြွေးများနှင့်ဒက်ဘစ်ကဒ်ပူဇော်ကလေးဘဝကတ်များအတွက်စတင်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားသုံးစွဲဖို့ခက်ခဲသည့်ကိစ္စတို့လုံးဝဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်ကုမ္ပဏီမှချည်ထားလေ၏။ စျေးဆိုင်များနှင့်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကတ်များရှိခဲ့ပါတယ်။ 1938 တဝိုက်ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကတ်များကိုလက်ခံလာတယ်။ အဆိုပါကတ်များကိုအတုများ၏အန္တရာယ်လျှော့ချဖို့စာရွက်၏အသက် 30 အတွက်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဘရွတ်ကလင်း၏ Flatbush အမျိုးသားဘဏ်ဂျွန် Biggins 1946 အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်ဘဏ်ထုတ်ပေးပထမဦးဆုံးခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုတီထွင်, ဘဏ်ဖောက်သည်များနှင့်ဒေသခံကုန်သည်အကြား ChargeIT လင့်ခ်လုပ်ထားသောဝယ်ယူမှုကိုခေါ်။
အားလုံးတကယ်စတင်မည်သို့ - Diners ကလပ်
McNamara လည်းသူသည်မုန့်ညက်မှုအတွက်ပေးချေရန်သူမ၏ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်အတူရှိခဲ့ဘူးသောရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူကစားသောက်ဆိုင်အားပေးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကဒ်အပေါ်သူ၏လက်မှတ်ရေးသားခြင်းအားဖြင့်နောက်ပိုင်းတွင်လွန်နေတဲ့ဥပဒေကြမ်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အထွေထွေအမြင်အရ McNamara အမှန်တကယ်ခရက်ဒစ်ကဒ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့အဘို့စိတ်ကူးရှိခဲ့ပါတယ်ဤအရာနှစ်ခုအပြန်အလှန်။ 1950 ခုနှစ်တွင်သူသည်မိမိရှေ့နေ Schneider နှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏ Diners ကလပ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီဖောက်သည်များနှင့်သူတို့ကနေဝယ်ကုမ္ပဏီများအကြားတစ်ဦးကြားခံဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးကတ်များတွင်ကဒ်များအပေါ်ငွေပေးချေမှုအေဂျင်စီများ '' အမည်များကိုစာဖြင့်ရေးသား။ အဆိုပါကတ်များကိုအစားအစာများ၏ငွေပေးချေမှုများအတွက်ဒရမ်သမားအတော်များများအသုံးပြုကြသည်။ ကလပ်ကတ်များစပိုင်းတွင်ခဲ့ကြသည် Diners သူတို့တစ်ဦးချင်းစီတစ်လအကြွေးအရာအားလုံး paid ဆိုလိုရာကတ်များအားသွင်း။
Bloomingdale ကာလကကုမ္ပဏီအတွက်မိတ်ဖက်များအတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သူဌာန၏စတိုးဆိုင် Bloomingdale ရဲ့နဲ့ဓာတ်ပုံမော်ဒယ် Vicky မော်ဂန်နှင့်အတူ၎င်း၏နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားförhålladeမှအမွေခံအဖြစ်အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Diners ကလပ်သမိုင်းမက်တီ Simmons အတွက်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့လူတစ်ဦး။ Simmons Diners ကလပ်၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးကာလအတွင်းခဲ့ပေမယ့်တစ်ဦးရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်ပါသည်။
အမေရိကန် cashless snowball ယခုလှိမ့်ခြင်းနှင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပိုကြီးနှင့်ပိုကြီးတယ်ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးဘဏ်ထုတ်ပေးဒက်ဘစ်ကဒ်နဲ့ Long Island ၏ Franklin ဟာအမျိုးသားဘဏ်အားဖြင့် 1951 ခုနှစ်တွင်ထုတ်ပေးခံရဖို့စတင်ခဲ့သည့်အခါတစ်ဦးကခြေလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ မကြာခင်မှာပဲအဲဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့ Diners ကလပ်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်ပိုပြီးကြီးမားခရက်ဒစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီကြီးမှကြီးပွားသတည်း။
အမေရိကန် Express နှင့်ဝဲလ်တဖက်
American Express အဆိုပါအမြန်မေးလ်ဝန်ဆောင်မှုထွက်သယ်ဆောင်ရန် Buffalo အတွက် 1850 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင်ငွေသားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ဟင်နရီဝဲလ်ဝီလျံတဖက်နှင့်ယောဟန် Butterfield နှင့်အတူအမေရိကန် Express ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ သုံးသယ်ဆောင်တစ်ဦးသို့ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ နှောင်းပိုင်း 50 ရာစုတှငျ Diners ကလပ်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက်ခရက်ဒစ်ကဒ်စစ်ဆင်ရေးစတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကိုလည်းရုပ်မြင်သံကြားကမ်ဘာပျေါတှငျက၎င်း၏ tentacles ရှိခဲ့ပါတယ်။ American Express က New York မှာအမျိုးမျိုးသောအဆောက်အဦးအတွက်၎င်း၏ဌာနချုပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။
American Express ဘို့အချိန်အမည်တူလူတို့နှင့်လည်းလူမျိုး၏ယခုဝဲလ်တဖက်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ရေတွင်းများတဖက်အကြာတွင်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဘဏ်များ၏တဦးတည်းအမည်ရှိ၏။ အမေရိကန် Express နှင့်ဝဲလ်တဖက်ရဲ့သမိုင်းကခွဲခြားရန်ခက်ခဲကြောင်းဒါကြောင့်လိမ်ယှက်ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆက်အဖြစ်အမေရိကန် Express ကို 1958 ခုနှစ်တွင်၎င်း၏ပထမဆုံးကတ်ကိုလွှတ်တင်ခဲ့အဖြစ်ကိုလည်းအကြွေးအကောင့်။ ဒါဟာအမေရိကန် Express ကိုကတ်များကို အသုံးပြု. ခဲ့ကြသူဖြစ်နိုင်ရင်စီးပွားရေးသမားများဖြစ်ပါတယ်။ American Express မကြာသေးမီကတ prepaid card ကို Bluebird Prepaid Card ကိုထုတ်ပေးသောအားဖြင့်အဓိကလက်လီကွင်းဆက် Walmart အတူလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။
American Express စျေးအကြီးဆုံးကတ်များ၏စည်းကမ်းချက်များ၌စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံကြသည်မဟုတ်ဒါကြောင့်သီးသန့်ဖြစ်သူ့ဟာသူစဉ်းစား။ ဖောက်သည်များကပိုတစ်ခုသီးသန့်ကလပ်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်လာစဉ်းစားနေကြသည်။
အဆိုပါစုဆောင်းမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထက် Mason တည်းခိုပိုပြီးဆင်တူသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဖောက်သည်များအတွက် oddest ဝယ်ယူမှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုစုစည်း။ အဆိုပါဒီဇိုင်းကိုသူတို့ဖောက်သည်များ၏ Rolls-Royce ကုသမှုအတန်ငယ်ဆင်တူသည်။ ဒါပေမယ့်ကတ်များဇိမ်ခံအသွင်အပြင်ဟာဇိမ်ခံကားနှိုင်းယှဉ်မရသင့်ပါတယ်။ ယင်းအစားသူတို့က "နောက်ချေးနှင့်အတူဟောင်းပုပ်ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း။ " များမှာ ဒါဟာစာအုပ်ထဲတွင်အခြိနျမှနျမှတွေ့ကြုံတတ်၏။ အဆိုပါခရက်ဒစ်ကဒ်၏မုန်းတီးမှုလျှပ်စီးအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုမှယုတ္တိဗေဒမှသည်ပြောင်းစာရေးဆရာရဲ့ဦးနှောက်ကိုရရှိသွားတဲ့။
American Express ကဒ်များပိုသီးသန့်ဗားရှင်းထို့ကြောင့် "အနုပညာရှင်ကဒ်" Elvis ကနေ Zlatan မှအရာအားလုံးကအသုံးပြုခဲ့ပြီးပါပြီ။ တချို့ကအဆိုတော်များသည်သူ၏ချစ်သူတို့ကဒ်ပင်တိကျမ်းစာ၌လာသည်သီချင်းစာသားရှိသည်။ ဤစာအုပ်ဖြစ်ကောင်းယခင်ကမျှသာတကယ်တော့ဖြစ်ခြင်း၏အထင်အမြင်ပေးထားတယျ။ ဒါဟာအကြွေးကတ်များနှင့်အခြား cashless ဆန့်ကျင်ငြင်းခုံနှင့်အတူထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်စာအုပ်လည်းဘောလုံးအရူးစာရေးဆရာကရေးသား cashless နှင့်အမှန်တကယ် (Zlatan ၏စကားပြော) ဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့ "hatbok" ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်မုန်းတီးမှုသည့်အချက်အလက်များကထောက်ခံသည်။ အထက်Dyngkärranသို့သော်တစ်ဦးအလိုအလျောက် synapsfyrverkeri ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တစ်ခုချွင်းချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ စာအုပ်ရဲ့ဘာသာရပ်များန်းကျင်ပြဿနာများကိုရေးသားသူမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်လာလည်းကဲ့သို့သောကလေးညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲကိုအလွယ်တကူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျက်ဒေါသနှင့်ရွံရှာ၏ခံစားချက်များကို၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်လာမယ့်အဖြစ်။ လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ပုဂ္ဂလိကရှိခဲ့သည်။
ပုံမှန်သဘောကုမ္ပဏီများ။ ကဒ်လိုင်စင်ရောင်းချမယ့်ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီရှိပါတယ်။ MasterCard ကိုရဲ့အစောပိုင်းသမိုင်းအကြွေးကတ်များဘို့နှစ်ခုဘဏ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Interbank နှင့် WSBA ။ ဒါဟာမာစတာတာဝန်ခံကိုခေါ်အကြွေးဝယ်ကဒ်တစ်ခုစီမံကိန်းတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ မာစတာတာဝန်ခံအကြာတွင် MasterCard ကိုအမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ ထိုသို့စတင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကဒ်ကုမ္ပဏီသို့တီထွင်မာစတာတာဝန်ခံနှင့်မက္ကဆီကန်ဘဏ် Banco Nacional အကြားပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ဇာတ်လမ်း၏တစ်ဦးကအသေးစိတ်မာစတာတာဝန်ခံ join ဖို့ခွင့်မပြုတာဖြစ်ပါတယ် Worthern ဘဏ်တို့ကသညျထသောဥပဒေရေးရာပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့သည်။ MasterCard ကိုရုံးချုပ်က New York ပြည်နယ်အတွက်ဝယ်ယူခြင်း၏မြို့အတွက်ယခုဖြစ်ကြသည်။
သူတို့Entréeကိုခေါ်သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုထုတ်ပေး၏အဖြစ်ပြပွဲမတိုင်မီအချိန်က၎င်း၏လက်ရှိအမည်ကိုရရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာ base ငါနှင့် base II ကိုခေါ်တော်မူစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းများအတွက်ပြီးတော့အသစ်ပေါ်ထွက်လာကွန်ပျူတာစနစ်များကိုချိတ်ဆက်သောဒက်ဘစ်ကဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သက်ဆိုင်ရာစနစ်များကိုမာစတာတာဝန်ခံ INAS နှင့် INET တောင်းဆိုခဲ့သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပရှိပါသောကြည့်ရန်၏အစိတ်အပိုင်းများကို 1974 ခုနှစ်တွင်ရောင်းချပြီး IBANCO ဟုခေါ်တွင်ဘဏ်များအုပ်စုတစ်စု၏လက်အောက်ခံဖြစ်လာခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဗီဇာယူအက်စ်အေမှနောက်ဆုံးမှာအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် BankAmericard အမည်ရှိခဲ့သည်။ IBANCO ဗီဇာအင်တာနေရှင်နယ်အကြောင်းနောက်ဆုံးတော့အမည်ပြောင်း။ ကုမ္ပဏီ၏ခရက်ဒစ်ကဒ်၏ပထမဆုံးမေးလ်ယောသပ်သည်ဝီလျံ၏ပဏာမခြေလှမ်းမှာ, Fresno ၏မြို့၌ရှိ၏။ ထိုအခါကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအခြားမြို့များစာပေးပို့လာ၏။ အဆိုပါစီမံကိန်းအားဝေဖန်မှုများနှင့်လိမ်လည်မှုနှစ်ဦးစလုံး၏ခပ်သိမ်းသောကာလအကျည်းတန်သွားခဲ့တယ်။ 1970 ပြပွဲမှအားလုံးအမည်များပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အကြွေးဝယ်ကတ်များ၏ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဘဏ်များမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကဒ်စနစ်ကစွန့်ပစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာမာစတာကတ်နှင့်ဗီဇာဖြစ်လာခဲ့သူမဟာတာဝန်ခံသို့မဟုတ် BankAmericard ဖြစ်စေပူးပေါင်းအမေရိကန်နှင့်အတူအစောပိုင်းစတင်ခဲ့သည်။
ကြည့်ရန် 1987 ခုနှစ်ဘဏ်ကတ်များ (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဤအမျိုးအစားအကြီးဆုံးကွန်ရက်က) အတွက်တစ်ခုလုံးကိုလက်လီကွန်ယက်ကို Interlink ဂရုစိုက်ဖို့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ကို '90 ခုနှစ်တွင် ATM စက်ကနေတဆင့်ရန်ပုံငွေနှင့်အတူတင်ဆောင်နိုင်စမတ်ကဒ်ဗီဇာငွေစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကြည့်ရန် Partner Program ကိုခေါ်တော်မူတစ်ခုခုအပါအဝင် chip ကိုကတ်များမှသံလိုက်အစင်းရာမှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်တွန်းအားပေး။ မန်ဟက်တန်မှာတော့နှောင်းပိုင်း 90 ခုနှစ်ဘဏ်တွေ Citibank နှင့် Chase မန်ဟက်တန်လုံးဝမအောင်မြင်ခဲ့ပါကြောင်းစမ်းသပ်မှုကဒ်။ မကြာခဏလူတွေကိုပဲတခါကဒ်ကိုပညတ်တော်မူ၏။ အင်တာနက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီက Yahoo နှင့်အတူတစ်ဦးကမိတ်ဖက်အင်တာနက်ပေါ်ရှိတစ်ဦးဝယ်ယူစာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်စတင်ခဲ့သည်။ လူတွေကသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာသူတို့ရဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းကိစ္စများကိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ Microsoft ကလူတို့နှင့်လည်းဖွင့်လှစ်အတော်လေး utkonkurerat ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုကြည့်ပါ။ display ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ Fresno အတွက်ရုံးချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဗီဇာနှင့်မာစတာကတ်ကိုမကျင့်စဉ်အမေရိကန် Express နှင့် Diners ကလပ်အကြွေးကဒ်များကိုမိမိတို့ကိုယ်ကိုထွက်ပေးပါ။ အဆုံးစွန်သောအမှု၌, ကအဓိကအားကတ်များထုတ်ပေးသောအဖွဲ့ဝင်ဘဏ်များသည်။ အခြားသူများကိုမကျင့်စဉ်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီများသည်အကြားအရေးပါသောခြားနားချက်အချို့ထို့ကြောင့်သရုပ်ဆောင်ဘဏ်ပြောသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဗီဇာနှင့်မာစတာကတ်ကတ်များဒေတာဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကိုနည်းပညာပိုင်းအလွန်ကွဲပြားခြားနားကွဲပြားနေသည်။ Banknet ဟုခေါ်တွင်မာစတာကတ်စနစ်က, ဗီဇာရဲ့ VisaNet ။
Discover နှင့် Sears
Discover ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ပဲတိုတို Discover အခြားအဓိကအမေရိကန်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီများသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဘဏ္ဍာရေးကုမ္ပဏီဒင်း Witter ၏ဌာနခွဲများက 1985 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှင့် Sears ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
Discover ဒါဟာကဒ် Discover Card အားပေးသည် 2007 ခုနှစ်တွင်လွတ်လပ်သောကုမ္ပဏီဖြစ်လာခဲ့သည်။ Discover ကွန်ယက်နှင့် Pulse ခေါ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကဒ်ကွန်ရက်များ။ ဆင်ခြေဖုံးချီကာဂိုအခြေစိုက်။ 2008 Discover ဘဏ္ဍာရေးအုပ်စုတစ်စု Citigroup ၏ Diners ကလပ်ဝယ်ယူခဲ့သည်။
Sears, Roebuck & Co ရစ်ချတ် Sears နဲ့ Alvah C. Roebuck အားဖြင့် 1886 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Sears အကြီးဆုံးအမေရိကန်မေးလ်-အလို့ငှာကုမ္ပဏီများအပါအဝင်အချိန်ကျော်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ချီကာဂိုမှာရှိတဲ့မိုးမျှော်တိုက် Sears Tower တွင်ယခု Willis Tower, ဟုခေါ်သည်နှင့်အတူ Sears လည်းဆက်စပ်နေပါတယ်။ အချိန်များအတွက်ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးအဆောက်အဦးဖြစ်ခဲ့သည်သောမိုးမျှော်တိုက် Sears အားဖြင့် 2004 သည်အထိပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါစစ်ဆေးမှုများပြန်လည် 1200 မှသူတို့ရဲ့မူလအစဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါစစ်ဆေးမှုများအင်္ဂလန်အတွက်သမားကအသုံးပြုခံရဖို့စတင်ခဲ့တဲ့အခါမှသာဒါပေမဲ့အသုံးပြုမှုအမှန်တကယ်ချွတ်။ စစ်ဆေးမှုများ, သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးပါပြီတစ်ခါတစ်ရံတွင်ငွေသားအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ ဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့ 50s အတွင်းစစ်သားတစ်ဦးငွေသားပေးချေမှုအဖြစ်စစ်ဆေးမှုများကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဒီဥပမာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ တိုင်းကုန်သည်တစ်ဦးချင်းစီဝယ်ယူနှင့်အတူတရုတ်အတွက်စစ်ဆေးမှုများလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ဒါဟာစစ်သားလပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်သူကသူ့အပိုင်ထဲမှာသူ့ကိုယ်သူရှိခဲ့ဖူးသောစစ်ဆေးမှုများမြင်ဘူးသောဖြစ်ပျက်နိုင်ဘူး။
ခရက်ဒစ်ကဒ်နဲ့စစ်ဆေးမှုများအလားတူလမ်းအတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းအသုံးအနှုန်းများ functioning ။ အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူလက်ခံသူထို့နောက်ဘဏ်မှာရွေးနှုတ်တော်မူနိုင်သည့်ပမာဏကိုများအတွက်စစ်ဆေးမှုများရေးသားခဲ့သည်။ အကောင့်ကိုစစ်ဆေးခြင်း (ခရက်ဒစ်ကတ်များနှိုင်းယှဉ်) အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါသည်။ တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦး "ဘဏ်ကဒ်များ၏ခရုရဲ့ဗားရှင်း" အဖြစ်စစ်ဆေးမှုများဆုံးမဩဝါဒ ပေး. ဖော်ပြခဲ့သည်။ kontantlöshetensကလေးဘဝအတွက် cashless အကြောင်းကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းဖြေရှင်းရေးအတွက်စစ်ဆေးမှုများနှင့် ပတ်သက်. အဖြစ်အများကြီးပြောခဲ့တယ်။
ပြီးသားဒီစစ်ဆေးမှုများနှင့် cashless လူ့အဖွဲ့အစည်းရှိရာယောဟနျသ Diebold များအတွက် 60 ရာစု vurmade အတွက်လူ။ မိမိအတိုင်ပင်ကုမ္ပဏီ Diebold Group မှဒီဆယ်စုနှစ်ထဲမှာဘဏ်များ၏အတော်ကြာကွန်ပျူတာ-based ကွန်ယက်ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ Diebold ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ဗဟိုဘဏ် (အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်က) တွင်အကြီးတန်းအနေအထားကိုသူဂျော့ခ်ျမစ်ချဲလ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ အဆုံးစွန်သောကွန်ပျူတာစနစ်များကိုပြောင်းရန်ဖို့အမေရိကန်ဘဏ်များကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါဟာငွေသားအဘို့ဒီနေ့ရဲ့ငြင်းခုံရန်အလွန်ဆင်တူခဲ့သောအဆိုပါစစ်ဆေးမှုများစျေးကြီးဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားသည်။
ဒါဟာအနာဂတ်စစ်ဆေးမှုများချောင်နှင့် cashless လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန် 1976 မှအဖွဲ့အစည်းအမေရိကန်သည် Bankers အသင်း (ABA) ကိုအကျိုးသက်ရောက်သောထိုလိုလူဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအစအောက်လူ့အဖွဲ့အစည်းကော်မတီ Check လို့ခေါ်တဲ့ကော်မတီကဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ဒီ၏ဗဟိုမှာတော့အလိုအလျောက် Dale Reistad ၏ ABA ဦးခေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ဒါပေမယ့်လည်းဆန့်ကျင် "ဖခင်kontantlöshetens" အမြဲတမ်းနိုင်ငံ၏နံပါတ်တစ်စစ်ဆေးနေသည်သာ။ အဲဒီမှာစစ်ဆေးမှုများလည်းပုံမှန်ဥပဒေကြမ်းများ၏ငွေပေးချေမှုအပျေါမှာသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများထံသို့စေလွှတ်ပြီ။
90 ရဲ့အစောပိုင်းများတွင်စစ်ဆေးမှုများအားဖြင့်ဆွီဒင်အတွက်သတ္တမငွေပေးချေခဲ့သည်။ အဆိုပါ 2000 ခုနှစ်, ကိန်းဂဏန်းဏု 0.1 ရာခိုင်နှုန်းသာဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်နှင့်အတူဆွီဒင်ဘဏ်များ, အရှင်ပိုပိုပြီးစစ်ဆေးမှုများအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဆှီဒငျဘဏ်များအဘယ်သူအားမျှသာစစ်ဆေးမှုများအဘို့အားသွင်းမလျှောက်ဝံ့ကြ။ ဆွီဒင်ဘဏ်နောက်ဆုံးတော့လုပ်သည့်အခါထို့နောက်သူကအလုံပိတ်အရှည်ခဲ့စစ်ဆေးမှုများနှင့်ကံကြမ္မာအဘို့အခြားနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ သိချင်စိတ်နှင့်အမျှစစ်ဆေးမှုများလိမ်လည်မှုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်လျှောက်လုံးတစ်ဦးရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်အကြွေးအကောင့်ကျော်လွန်ဖို့မသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ရှည်လျားသောကြောင့်ပိုက်ဆံနဲ့အခြားသောအရာတို့ကိုရန်အသုံးပြုအမှန်တကယ်ငွေသားမီ။ Shell ကပိုလီနီးရှားထိုသို့သောပိုက်ဆံအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ "ပိုက်ဆံ" ၏အခြားအဥပမာကျောက်, အမွေး, ငါးချိတ်များနှင့်ပင်မွေးမြူရေးခဲ့ကြသည်။ ပုံမှန်ဒင်္ဂါးပြား၏မရှိခြင်းအတွက်တခါတရံတွင်အသုံးပြုသော oddest ငွေပေးချေရှိသည်။ သူတို့ကပြင်ပကမ္ဘာကနေခွဲထုတ်ခဲ့ကြသောကြောင့်, ဥပမာ, သူတို့ Sparta အတွက်ငွေကြေးအဖြစ်သံဘားကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အနောက်တောင်ဒင်္ဂါးပြား 600 ဘီစီအာရှမိုင်းနား၏အစိတ်အပိုင်းများတွင်အသုံးပြုခံရဖို့စတင်ခဲ့ အရှေ့အနီးကျနော်တို့အခုအရှေ့အလယ်ပိုင်းမခေါ်အဘယ်သို့သောအကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ lydiske ဘုရင်က Croesus သူကို 500 ဘီစီ၌ရှိ၏ ရွှေငွေကိုဒင်္ဂါးပြားသွန်းလုပ်ခဲ့ကြသည်။ သူလည်း Croesus ကိုခေါ်ကာကျနော်တို့မှာအများကြီးကြွယ်ဝသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အမိန့်တော်ကို၎င်းခဲ့သည်။ အဓိကအားဖြင့်ကြေးနီရန်အသုံးပြုသည့်အဖိုးတန်သတ္တုရှားပါးမှုရှိခဲ့သည်ဘယ်မှာ။ ဒီဥပမာအဘို့, အစောပိုင်းရောမမြို့ထဲတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဗိုက်ကင်းခေတ်ကာလအတွင်းအစ္စလာမ့်ကမ္ဘာကနှစ်ဦးစလုံးထံမှနှင့်ဥရောပ၏အစိတ်အပိုင်းများကနေဆွီဒင်နိုင်ငံမှအများကြီးဒင်္ဂါးပြားတင်သွင်းခဲ့ကြသည်။ ငွေကြေးပြောဆိုရန်ဒါဗိုက်ကင်းဘို့, ငွေတန်ဖိုးကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ပင်ငွေအပေါရာဏဒင်္ဂါးပြားများနှင့်ငွေပေးချေမှုအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောငွေအပစ္စည်းများကို။ နောက်ပိုင်းဇာတ်လမ်းထဲမှာပိုက်ဆံမှလျှောက်ထားကြောင်းကြီးမားတဲ့ကြေးနီပြားရှိခဲ့သည်။
ပထမဦးဆုံးအဆွီဒင်, ငွေဒင်္ဂါးပြားအစောပိုင်း 1500 ခုနှစ်တွင်တစ်နှစ် 1000. န်းကျင် Sigtuna အတွက်သည့်ဒင်္ခဲ့ကြသည်ရပေမဲ့နည်းပါးတဲ့ရေတွက်တော့တယ်။ အလယ်ပိုင်း 1800 ခုနှစ်တွင်စတင် 100 အဆင့်ခွဲခြားခဲ့သည့်တစ်ဦးဦးခေါင်းဒင်္ဂါးပြား (သရဖူ, ပြီးတော့သရဖူ), ကိုအသုံးပြုဖို့ဆွီဒင်နိုင်ငံတွင်စတင်ခဲ့သည်။ ဆွီဒင်များထဲမှ 1931 ခုနှစ်တွင်ရွှေစံစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့အခါဒင်္ဂါးပြားများနှင့်ဥပဒေကြမ်းများအကြားအမှန်တကယ်ကွာခြားချက်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ငွေစက္ကူတွေ၏ praktien အတွက်အဓိပ်ပာရွှေစံရွှေအရံမြို့မှရွှေများအတွက်ဖလှယ်နိုင်ပါတယ်။ ဤသည်နှင့်အထွေထွေအတွင်းငွေစက္ကူတွေတစ်ဦး၏ဂတိတော်ကိုနှင့်ပြည်နယ်အတွက်ယုံကြည်မှုအပေါ်အခြေခံခဲ့ပါတယ်။ ယခုပင်ဖြစ်၏အဖြစ်ပြည်နယ်များအတွက်တစ်ဦးကယုံကြည်မှုအပေါ်အားကိုးလို့မရဘူး။ အဆိုပါဘဏ္ဍာရေးအရည်အချင်းမရှိအလွန်ကျယ်ပြန့်သည်။ သို့သော်အားလုံးမှာမဆိုယုံကြည်မှုလာအောင်နှိုးဆွမတစ်ဦး unconscionable cashless လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကျွန်ထက်ငွေသားမဟုတ်ဘဲမကောင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်။
ဘဏ်မှတ်ချက်သမိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးနီးကပ်စွာပုံနှိပ်ခြင်း၏အနုပညာနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ သူတို့အမှန်တကယ်ငွေပေးချေဖြစ်လာခဲ့သည်မတိုင်မီသူတို့မူလကလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများသို့မဟုတ်ကြွေးမြီ၏ပုံစံရှိကြ၏။ အမှန်တကယ်ဒင်္ဂါးပြား (600 ဘီစီ) လာမယ့်စတင်ခဲ့အဖြစ်တစ်ချိန်တည်းအကြောင်းကို tillverkads ပထမဦးဆုံးတရုတ်မှာငွေစက္ကူတွေ။ ထိုအခါငွေစက္ကူတွေ၏အသုံးပြုမှုအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းအလယ်ခေတ်တွင်ဥရောပမှတရုတ်ကနေပြန့်နှံ့စတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာဆွီဒင်အတွက်အမှန်တကယ်ကြီးနှင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ 1600 ခုနှစ်တဦးတည်းဥရောပ၌သင့်လျော်သောငွေစက္ကူတွေကိုပေး၏။ ပထမဦးစွာ Stockholms Banco အသုံးပြုပုံထို့နောက်ဘုံ 1800 ရဲ့အဆုံးမှာဘဏ်နှင့်နောက်ဆုံးတွင် Riksbank signboards ။ အစောပိုင်းကထို Riksbank ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မှတ်စုထက်အခြားဘဏ်များကိုဖိလေ၏။ ဆွီဒင်မှ Next ကိုအင်္ဂလန်မှာငွေစက္ကူတွေရိုက်နှိပ်ထားသည်။
Numismatics - တစ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်သိပ္ပံနှင့်ဝါသနာအရ
အကြွေစေ့စုဆောင်းခြင်းကြီးမားတဲ့စာပေအရပ်၌သူတို့အားဝါသနာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပထမဦးဆုံးအဆွီဒင် numismatikern ဧလိယ Brenner ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူဟာ 1600 အဆုံးမှာအဘယ်သူ၏ခေါင်းစဉ်ဆွီဒင်ကောင်းစွာထဲမှာ "Svea နှင့်Götersတိုင်းပြည်အကြွေစေ့အဘိဓါန်" နဲ့တူတစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မယ်ဒင်္ဂါးပြား၏လုပျငနျးရေးသားခဲ့သည်။ ဤအပိုင်းကိုစတော့ဟုမ်းအတွက်အကြွေစေ့ဝန်ကြီးအဖွဲ့သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ထောက်ခံချက်နှင့်အတူအရပျ၌လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအဆွီဒင်မြို့ကြီးများအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြွေစေ့ collection များကိုလည်းရှိပါတယ်။ အကြွေစေ့ဝန်ကြီးအဖွဲ့ငွေသားဟာကိုယ်ပိုင်ပြတိုက်နှင့်ဆွီဒင်နိုင်ငံတွင်အကြီးဆုံး numismatic စုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ 1975 ခုနှစ်သီးခြားပြတိုက်ဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်ဆယ်စုနှစ်၏စုံတွဲတစ်တွဲအကြာတွင်ရဲတိုက်ဟေးလ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
ဤစာအုပ်ရဲ့အခြေခံသတင်းစကားကိုတကမ်ဘာတစ်ဦးစုစုပေါင်း cashless အာဏာရှင်စနစ်ချဉ်းကပ်ပိုပိုပြီးသည်မည်မျှကိုပြသရန်ဖြစ်ပါသည်။ ပိုငျသညျတခုဓါးနှင့်အတူလုပ်ကြံသောအားဖြင့်အံ့ဖှယျ numismatics ကံမကောင်းသည်သူ၏ညှို့ဆုံးရှုံးပျောက်ကွယ်သွားဖို့ကပိုငွေသား
ကမ္ဘာ့သမိုင်းဝင်ကြိုးရဲ့အဆုံးမှာထို့နောက်နောက်ဆုံးတွင်ချိုးဇာတ်လမ်း၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြတ်သန်းသော်လည်း။ ရေးသားသူဒင်္ဂါးပြားနဲ့သူတို့ရဲ့သမိုင်းနှင့် ပတ်သက်. စာအုပ်ရေးသားဖို့စတင်မတိုင်မီယခုကံမကောင်းရပ်တန့်ဖို့အချိန်ပါပဲ။ ဤစာအုပ်သည်ခေတ်သစ်ငွေထိန်းသိမ်းအကြောင်းကိုဆက်ဆက်အများဆုံးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ဤလေးနက်တောင်းဆိုမှုကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဆွီဒင် numismatists နှင့်အကြွေစေ့စုဆောင်း! စည်းလုံး! အဟောင်းနှင့်အသစ်ငွေသားကိုထိန်းသိမ်းဖို့စစ်တိုက်ခြင်းငှါကူညီပေးခြင်း။ သမိုင်း၏ cashless တည်ထောင်ခြင်းစစ်သွေးကြွဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တယ်။
Vecka 49, torsdag9december 2021 kl. 13:43